Inkampani yethu ibhalise i-Dongguan Tianqin Packaging Products Co, Ltd. ngo-2010, ethi ivelise ikakhulu zonke iintlobo zeemveliso zokupakisha; ngo-2020, siza kuphuhlisa ishishini lesikhwama kunye nokuseka iDongguan Yihua Handbag Co., Ltd. ukuvelisa iimveliso ezahlukeneyo zokuthunga; ungenziwa ngemfuneko ngokweemfuno Ukuqinisekisa kunye nokuveliswa kweebhegi ezahlukeneyo, iingxowa zokuthambisa, iingxowa zezixhobo, iingxowa zamagxa zamadoda nezabafazi, iingxowa zolonwabo, njl .; ngomgangatho ophezulu, iimveliso zithunyelwa ikakhulu eYurophu, eMelika, eJapan, Korea nakwezinye iindawo.
Umzi-mveliso ubekwe kwikomkhulu lemveliso-Dongguan. Umzi-mveliso unazo zonke iintlobo zezixhobo zemveliso. Inika inkonzo yokumisa enye ukusuka kuyilo lwesampulu kwangoko kunye nobungqina bokuthengwa kwexesha eliphakathi kunye nemveliso ukuthunyelwa kwemveliso okugqityiweyo kamva.
Iimveliso zisetyenziswa ngokubanzi kulonwabo lwangaphandle, ukhenketho, ukunyuka intaba, ezemidlalo, iintlanganiso zokuhlangana, izidlo, njl.
Inkampani yethu ine: imoto ye-DY yekhompyuter, imoto ephezulu, imoto yekholamu, umatshini we-embroidery wekhompyuter, umsiki wephepha, umatshini webhiya, umatshini wokubetha kunye nezinye izixhobo zemveliso.
Iimveliso zithunyelwa eMzantsi Korea, eJapan, eYurophu naseMelika kunye nakwezinye iindawo.
3: Uqinisekiso lomgangatho: Ukuba kukho ingxaki esemgangathweni, inokulungiswa okanye yenziwe simahla;